Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kia Niro Cusub Oo Soo Bandhigtay Kulankii Ugu Horeeyay Ee Aduunka
Shirkadda Kia ayaa shaaca ka qaaday Niro-ka cusub maanta markii ugu horeysay 2021 Seoul Mobility Show, kaas oo ujeedadiisu tahay in qof walba la heli karo dhaqdhaqaaq waara.
Niro-ka cusub wuxuu muujinayaa sida ay uga go'an tahay Kia dhisidda mustaqbal waara. Sida qayb muhiim ah oo ka mid ah Kia ee safka saaxiibtinimo ee sii koraya, qaabka cusub ayaa soo jiidan doona baahiyaha adag ee macaamiisha miyir-qabka ah.
Si buuxda ayaa dib loogu habeeyey, Niro-ka cusub waxa lagu soo saaray falsafada naqshadaynta ee shirkadda, iyada oo buuxinaysa habraaca 'Joy for Reason'. Waxay ka qaadanaysaa dhiirigelinta dabeecadda maaha oo kaliya naqshadeynta laakiin sidoo kale doorashada midabka, walxaha iyo dhammaadka si ay u dhufato dheelitirnaan qumman oo u dhexeeya habka mas'uuliyadda deegaanka iyo aragtida mustaqbalka.
Saamaynta xooggan ee fikradda Habaniro 2019 waxay ka muuqataa naqshadda bannaanka ee Niro oo leh muuqaalkeeda qurxoon iyo geesinimada leh ee isdhaafsiga ah iyo tignoolajiyada sare ee laba cod. Tiir ballaadhan oo xagga danbe ah ayaa kor u qaada socodka hawada si uu u hagaajiyo hawada hawada oo uu ku milmo laydhka dambe ee qaabka boomerang-ga ah.
Saxiixa Kia 'wejiga shabeelka' ayaa loo beddelay Niro-ka cusub oo hadda wuxuu ka bilaabmayaa daboolka, ilaa iyo ilaa dayr adag oo hoose. Naqshadaynta hore ee casriga ah waxay ku dhammaatay 'wadnaha garaaca wadnaha' LED DRL (nalalka socda maalintii) kaas oo abuuraya kalsooni iyo muuqaal cajiib ah wadada.